खुट्टामा यस्ता ६ चिन्ह हुने महिलासँग बिवाह गर्नु निकै शुभ ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/खुट्टामा यस्ता ६ चिन्ह हुने महिलासँग बिवाह गर्नु निकै शुभ !
अहिलेको पुजीवादी समाजमा हरेक मानिस पैसाको पछाडि भाग्ने गर्दछन्। दिनिदि बढ्दो महंगी र विलासिताका कारण मनिसहरू पैसाकोपछि दाैडिरहेका छन्।
हरेकको चाहना हुने गर्दछ, आफ्नो साथमै धेरै धन होओस्। तर चाहेर मात्र धन आउँदैन्। मेहनत गर्नुपर्दछ। तर कतिपय अवस्थामा मेहनत गर्दा पनि पैसा आउँदैन् । भन्ने गरिन्छ धन, दौलत भाग्यसँग पनि जोडिने गरिन्छ। भाग्यमा जति धन हुने गर्दछ, त्यति उनीहरुलाई प्राप्त हुने गर्दछ।
समुद्र शास्त्रका अनुसार शरीरको अंग हेरे पनि सजिलै भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै महिलाको पैताला, त्यसमा रहेका चिन्ह र औँलाबाट पनि पतिको सुख र भाग्यका बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसैलेपनि यस्ता चिन्ह हुने महिलासँग बिवाह गर्नु अति उत्तम हुन्छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
– यदी कुनै महिलाको खुट्टाको मध्यमा र अनामिका औँलाको लम्बाई बराबर हुन्छ भने त्यसलाई शुभ मानिने गरिन्छ। यस्ता
महिलाको पतिलाई कुनै किसिमको आर्थिक समस्या आउदैन्।
– महिलाको खुट्टाको आकार कोमल, गोलो र आकर्षक हुन्छ भने त्यस्ता महिलाको पतिको जीवनमा हरेक सुख प्राप्त हुने गर्दछ।
– यदी कुनै महिलाको पैताला मोटोवाला भागबाट कुनै रेखा खुट्टाको औँलातर्फ गएको छ भने त्यस्ता महिला पतिका लागि निकै
शुभ मानिने गरिन्छन्।
– हिड्ने समयमा यदी कुनै महिलाको कान्छि औँला र त्यसको नजिकैको औँलाले जमिन छुने गर्दछ भने त्यस्ता महिलालाई विवाह
गर्ने व्यक्तिको जीवनमा निकै धनलाभ हु्ने गर्दछ।
-यदी कुनै महिलाको पैतालामा कमल वा छात्रको चिन्ह छ भने यस्ता महिनाका पतिको राजनीतिक क्षेत्रमा भाग्य चम्किने गर्दछ।
-यदी महिलाको खुट्टाको कान्छि औँला र त्यसको नजिकको औँलाको लम्बाई छोटो हुने गर्दछ भने यस्ता महिलाका पतिमा कुनै
किसिमको समस्या आउँदैन्।
यो पनि- शरीर स्वास्थ रहन खानुहाेस् यी ८ फलफूल
कागती: भिटामिन सी युक्त फलफूलले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउने काम गर्छ । विभिन्न एलर्जीबाट बचाउनका लागि पनि भिटामिन सी युक्त फलफूल आवश्यक पर्छ । भिटामिन सी पाइने फलफूलहरुमा सुन्तला, निबुवा, कागती लगायत पर्दछन् । यीनीहरुमा कायोफ्लेवोनाइड र लाइमोनीन समेत पाइन्छ । एन्टीअक्सीडेन्ट्सको उपस्थितीका कारण यी फलफूलहरुले क्यान्सर उत्पन्न गर्ने तत्वसँग लड्ने क्षमता समेत प्रदान गर्छ ।
अनार: एनीमिया अर्थात शरीरमा रगतको कमी कमी हुँदा रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउन अनार महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको सेवनले छाला समेत स्वस्थ रहन्छ । यसमा पाइने सुक्ष्म पोषक तत्वले शरीरको भित्री अंग समेत बलियो बनाउन सहयोग गर्छ ।
ब्रोकाउली: यसमा बीटा क्यारोटीन र आइसोथियोसायनेट नामक पोषक तत्व पाइन्छ । यसकारण ब्रोकाउलीले क्यान्सर रोकथाममा सहयोग गर्दछ । यस्तै यसले एन्टीएजींगको प्रक्रियामा समेत सहयोग गर्दछ । त्यसकारण खानामा ब्रोकाउलीको प्रयोग गर्नु निकै नै लाभदायक हुन्छ ।
जौ: जौमा पर्याप्त मात्रामा फाइबर पाइन्छ । यसकारण मानिसमा कब्जियतको समस्या हटाउनका लागि यो अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ । साथै यसले पाचन प्रणाली समेत सक्रिय बनाउँछ । यसमा बीटाग्लूकेन्स हुने हुनाले कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउनका लागि पनि यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
लसुन: लसुनको सेवनले शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ्छ । यस कारण यसले शरीरलाई धेरै रोग लाग्नबाट बचाउँछ । यसको सेवनबाट उच्च रक्तचापको नियन्त्रण गर्न समेत सहयोग मिल्छ । साथै एन्टीएजिंग प्रक्रियामा समेत यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।
ओखर तथा बदाम: यसको सेवनले स्थास्थ्य तन्दुरुस्त हुनुका साथै सुन्दरतामा पनि वृद्धि गर्छ । यसमा हुने भिटामिन ई टोकोफेरलको रुपमा पाइन्छ, जुन मुटुका लागि अत्यन्तै लाभकर हुन्छ । यस्तै, बदामको सेवनले पनि मस्तिस्कको क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ । आँखाको प्रकाश बढाउनका लागि पनि यो निकै लाभकर हुन्छ । बदाममा भिटामिन बी, भिटामिन ई, पाइन्छ ।
गेडागुडी: बुढ्यौलीपनलाई हटाउनका निम्ति अंकुराएको गेडागुडी खानु लाभदायक हुन्छ । यसको सेवनले रोग प्रतिरोधक क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । त्यस्तै, धेरै रोगहरुबाट बचाउन यसले सहयोग गर्छ । अंकुराउँदै गरेको गेडागुडीको सेवनले छाला समेत बलियो तथा कसिलो बनाउँछ ।
ग्रीन टी: ग्रीन टीमा एन्टी अक्सीडेन्ट्स तत्व हुन्छ । यसले स्वास्थ्यलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ । यसले शरीरको तौल घटाउने, कपाल झर्नबाट रोक्ने जस्ता काम गर्छ । यसको सेवनबाट रगतमा चिनीको मात्रा कम गर्न मदत गर्छ । यसको सेवनबाट कोलेस्ट्रोलको समेत सन्तुलन गर्दछ । यसले रक्त चापलाई समेत नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्छ ।